Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 22/05/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 22/05/2019
(နေပြည်တော်၊ ၂၂-၅-၂၀၁၉ ရက်)
UN High Commissioner for Refugees visits Maungtaw, Buthidaung Townships
Maungtaw May 21
Mr. Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees and its entourage toured around villages in Buthidaung and Maungtaw Townships on 21 May 2019.
At Ywar Ma Gone Nar Village, they asked the locals about their necessity and saw progress of drinking water reservoir renovation in there. Then, they went over to Yan Aung Myain Monastery to meet with displaced persons. During the meeting, the High Commissioner said that he represents humanitarian work there and that they are ready to help any place in need of help.
Afterwards, they visited Phar Wut Chaung village in Maungtaw Township and interviewed some locals. They then met with Muslims in Pan Taw Pyin (middle) Village and inquired their needs. They also visited places whereaschool and salt water dyke are to be built and they visited Pan Taw Pyin Village to see new housing donated by Yangon Region Government.
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Mr. Filippo Grandi နှင့်အဖွဲ့ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်ဒေသမှ ကျေးရွာများသို့ မြေပြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာ
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Mr. Filippo Grandi နှင့် အဖွဲ့သည် မေလ ၂၁ ရက်တွင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်၍ ကျေးရွာအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့သည်။
မဟာမင်းကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် ရွာမဂုံးနားကျေးရွာရှိ ဒေသခံပြည်သူများအား တွေ့ဆုံ၍ လိုအပ်ချက်များ မေးမြန်းပြီး သောက်သုံးရေကန် ပြန်လည်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေအား လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ထို့နောက် မဟာမင်းကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် ရန်အောင်မြင်ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းသို့ သွားရောက်ကာ တိုက်ပွဲရှောင် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မဟာမင်းကြီးက မိမိသည် လူသားချင်းစာနာမှုကိစ္စများကို ကိုယ်စားပြု ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့အဖွဲ့အနေဖြင့် အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လိုအပ်သည့်ဒေသများတွင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ မဟာမင်းကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် ဖားဝပ်ချောင်းကျေးရွာရှိ အမက (မူလွန်) ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိကာ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ သိရှိလိုသည်များ မေးမြန်းခဲ့သည်။ ယင်းနောက် မဟာမင်းကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် ပန်းတောပြင် (အလယ်) ရွာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး လိုအပ်သည်များအား မေးမြန်းကာ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရေးနှင့် ရေငန်တားတာ တည်ဆောက်လိုသည့် မြေနေရာအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့်ပြင် ပန်းတောပြင်ရွာသစ်သို့ သွားရောက်ကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းဆောက်လုပ်ပေးသည့် နေအိမ်သစ်များအား ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။